Iimpawu umbhobho yentsimbi uphose
A: Umbhobho wesinyithi uthintela ukusasazeka komlilo ngcono kunombhobho weplastikhi kuba i-cast-iron ayitshisi. Awuyi kuxhasa umlilo okanye utshise, ushiye umngxuma apho umsi kunye namadangatye anokugqitha kwisakhiwo. Kwelinye icala, ipayipi evuthayo enje nge-PVC kunye ne-ABS, inokutsha, Ukucima umlilo kumbhobho onokutsha kukusebenza kakhulu, kwaye izinto ziyabiza, kodwa ukumisa umlilo kumbhobho wesinyithi, umbhobho ongatshiyo, kulula ukufaka kwaye ayibizi.
B: Enye yeempawu ezinomtsalane kumbhobho wesinyithi kukuphila kwawo ixesha elide. Kuba umbhobho weplastikhi ubufakiwe ngobuninzi kuphela ukusukela kwiminyaka yoo-1970, ubomi bayo benkonzo abukagqitywa. Nangona kunjalo, umbhobho wentsimbi sele usetyenzisiwe ukusukela kwiminyaka ye-1500 eYurophu. Njengombandela wenyani, umbhobho wentsimbi ophambili ubusoloko unikezela ngemithombo yaseVersailles eFrance ngaphezulu kweminyaka engama-300.
C: Zombini umbhobho wentsimbi waphosa kunye nombhobho weplastiki unokuchaphazeleka kwizixhobo ezonakalisayo. Umbhobho wesinyithi uphoswa kukudamba xa inqanaba le-pH ngaphakathi kombhobho lihla laya ngaphantsi kwe-4.3 ubude bexesha, kodwa akukho sithili sokuhambisa amanzi amdaka eMelika esivumela nantoni na ene-pH engaphantsi kwesi-5 ukuba ilahlwe kwinkqubo yayo yokuqokelela umjelo. Yi-5% kuphela yemihlaba eMelika eyonakalisayo ukwenza isinyithi, kwaye xa ifakwe kule mihlaba, umbhobho wentsimbi okhuselweyo unokukhuseleka ngokulula nangokungabizi mali ininzi. Kwelinye icala, umbhobho weplastiki usengozini kwii-asidi ezininzi kunye nokunyibilikisa kwaye unokonakaliswa ziimveliso zepetroleum. Ukongeza, ulwelo olushushu olungaphezulu kweedigri ezili-160 lunokonakalisa iinkqubo zepayipi okanye zeABS, kodwa zibangele ukuba kungabikho ngxaki kumbhobho wentsimbi.